Macalinka fasalka koowaad ee loo magacaabay MN macalinka sanadka semifinalist | Faahfaahinta Wararka Degmada
Ma jiran tahay?
Wax Ku Barashada Qalbiga
Sheekooyinka Guusha Faras
Macallinka fasalka koowaad ee loo magacaabay macalinka sanadka ee MN semifinalist
Macallinka fasalka koowaad Robyn Hassani ayaa loo magacaabay semifinalist-ka macalinka sanadka ee Minnesota! Waxay wax ku barataa 100% ardayda barta internetka ee Andersen iyo Lake Elmo. Hassani wuxuu ka mid yahay 25 aqoonyahan oo ku baahsan gobolka oo dhan oo ku soo kordhay barnaamijka abaalmarinta. Musharrixiinta waxaa ka mid ah dugsiga barbaarinta kahor illaa iyo fasallada 12 iyo macallimiinta Waxbarashada Carruurnimada Hore iyo Macallimiinta Waxbarshada Aasaasiga ee Dadka Waaweyn ee ka kala socda dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Dabayaaqada bishaan, guddi ayaa u goyn doona liiska in ka badan 10 qof oo isugu soo haray.
Hassani wuxuu wax dhigayay 15 sano. 3dii 1 / 2dii sano ee la soo dhaafay waxay joogtay Andersen halkaas oo ay ka caawisay aasaasida Qolka Cagaaran - meel aamin ah oo ay aadaan ardayda markay dareemayaan walwal ama ay ku dhibtoonayaan inay maareeyaan dhaqankooda. Sannadkan, Hassani waxaa laga codsaday inay baraan fasalka koowaad ee khadka tooska ah halkaasoo ay ku leedahay fasal isugu jira ardayda Andersen iyo Lake Elmo. Waxyaabaha ay ugu jeceshahay waxbarista shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah waa farxadda ay ku aragto wajiyada ardayda markay yeeshaan kalsooni dhowaan la ogaaday. Waxay tiri magacaabista Macallinka Sanadka waxay ka dhigan tahay xitaa inbadan oo soo socota inta lagu jiro sanad dugsiyeed adag.
"Sanad badan oo hubanti la'aan ah oo ku saabsan sida iskuulka qadka u egyahay iyo sida uu dareemayo, waxaan go aansaday inaan ka dhigo sida ugu macquulsan iskuulka 'dhabta'," ayuu yiri Hassani. Waxaan u shaqeeyay si adag si aan ugu dhex dhiso fasalkayaga dareen guud (iskuulada oo dhan) oo aan yeesho saaxiibtinimo. Aad ayaan ugu faraxsanahay in ardaydu ay khibrad wanaagsan u leeyihiin barashada iyo koritaanka khadka tooska ah. ”
Gudiga iskuulka wuxuu ansaxinayaa in lagu daro fasalada Brookview
Sideed fasal oo cusub ayaa lagu dari doonaa Dugsiga Hoose ee Brookview ee ku yaal Woodbury si looga caawiyo wax ka qabashada ciriiriga badan ee qaybta koonfureed ee degmada.
10 arday oo ciyaartooy ah ayaa saxiixay inay ka ciyaaraan heerka kuliyada
Toban arday-ciyaartooy ah oo ka socda Dugsiga Sare ee Stillwater Area ayaa saxiixay inay ka ciyaaraan kulleejooyinka iyo jaamacadaha inta lagu jiro Maalinta Saxeexa Qaranka.
Maamulayaal cusub oo loo xushay laba dugsi hoose
Gina Doe waxaa loo xushay inay maamule ka noqoto Afton-Lakeland iyo Dr. Chris Rogers wuxuu maamule ka noqon doonaa Dugsiga Hoose ee Brookview bilowga dayrta.
Degmadu waxay dejineysaa qorshe 3 qaybood ah oo wax looga qabanayo dhaqaalaha, tas-hiilaadka
Guddiga iskuulka waxay tixgelinayaan canshuur aan la codeyn oo la ansixiyay si loo ballaariyo isla markaana loo ballaariyo Dugsiga Hoose ee Brookview ee ku yaal Woodbury.
In dunida laga dhigo meel wanaagsan, hal adeeg oo adeeg ah markiiba
Ardayda ku jirta Oak-Land's National Junior Honor Society waxay si adag uga shaqeynayaan inay daryeelaan shakhsiyaadka ay saameynta ugu badan ku yeelatay COVID-19.
Sideed macalin iyo shaqaale ayaa la yaabay Abaalmarinta Iskaashiga
Sideed macalin iyo howl wadeenada Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater waa qaatayaasha abaalmarino qaas ah oo heer sare ah oo ay maal galisay The Partnership Plan.
Andersen iyo Lake Elmo Elementary school Robyn Hassani ayaa loo magacaabay semifinalistka macalinka sanadka ee Minnesota.
Isdiiwaangeli hada fasalada Waxbarashada Bulshada xagaaga
Fiiri dhammaan howlaha madadaalo leh ee Tacliinta Beesha ay bixiso xagaagan.